Convert Big Size Photo Into Small Size
Facebook, Twitter, Google Plus तथा Mig33 जस्ता विभिन्न Social Networking Site को प्रयोग नेपालमा पनि सामान्य भइसकेको छ । विशेषगरी टिनेज साथीहरुमा त यसको क्रेज नै छ भन्दा पनि हुन्छ । यी सबै साइटको आ–आफ्नै विशेषता छ तर यी सबैमा हामी सबैले भोग्ने गरेको एउटा साझा समस्या भनेको ठुलो साइजको फोटोहरु अपलोड गर्दा लाग्ने समय हो । फोटो शेयर गरेर कमेन्ट पाउँदा जति मज्जा आउँछ, फोटो अपलोड हुदाँ लाग्ने टाइमले त्यो भन्दा बढि झ्याउ लाग्नुलाई पनि सामान्य नै मान्नु पर्छ । यही समस्याको निम्ति यो पोस्टमार्फत एउटा यस्तो Application को बारेमा बताउन गइरहेको छु । जसले ठुलो साइजको फोटो लाई सजिलै सानो साइजमा Convert गर्न सहयोग गर्नेछ ।
1. सर्वप्रथम तलको चित्रमा जस्तै जुन फोटोको साइज घटाउन खोज्नुभएको त्यसलाई Right Click गरी
Open With बाट Microsoft Office Picture Manager मा खोल्नुहोस ।
2. अब चित्रमा जस्तै PIcture मा Click गरी Compress Picture मा क्लिक गर्नुहोस ।
3. अब पुनः चित्रमा जस्तै Compress For बाट कुनै एउटा अप्सन छान्नुहोस ।
चित्रमा Document Option Choose गर्दा पहिला 1.59 MB (1628 kb) रहेको फोटोको साइज घटेर जम्मा 304 KB भएको छ । हजुरले आव्श्यकता अनुसार अरु अप्सन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
4.अब सानो साइजको फोटोलाई सेभ गर्न चित्रमा जस्तैः File Menu मा गई Save as Option मा क्लिक गर्नुहोस
Direct Save गर्दा Original Photo Replace हुने हुदाँ Save as Option प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
अब अन्त्यमा एउटा कुनै नयाँ नाम दिएर चित्रमा जस्तै Save मा क्ल्कि गर्नुहोस ।
Special Thanks2Dev Shrestha .